CH3COOCH=CH2 = CH3CHO + CH3COOH + H2O | Equation simika
= acetaldehyde + asidra ethanoic + rano | Toetra H +
CH3COOCH = CH2 → CH3Cho + CH3COOH + H2O
acetaldehyde asidra etanoika rano
Fampahalalana fanampiny momba ny equation CH3COOCH = CH2 → CH3Cho + CH3COOH + H2O
Inona no toetry ny fihetsiky ny CH3COOCH=CH2 () ?
Ahoana no mety hitranga sy hamokatra CH3CHO (acetaldehyde) sy CH3COOH (asidra etanoika) ary H2O (rano)?
Hidrolisis amin'ny tontolo asidra
Tranga taorian'ny CH3COOCH=CH2 ()
Na raha misy amin'ireto zavatra manaraka ireto: CH3COOCH = CH2, manjavona
Fanontaniana fanampiny mifandraika amin'ny fanehoan-kevitra simika CH3COOCH = CH2 → CH3Cho + CH3COOH + H2O
Ireo singa mifandraika amin'ny CH3COOCH=CH2 ()
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana an'ny CH3COOCH=CH2 ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy CH3COOCH=CH2 () ho reactant?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny CH3CHO ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika manana CH3CHO (acetaldehyde) ho vokatra?
Inona avy ireo toetra simika sy ara-batana amin'ny CH3COOH ()? Inona avy ireo fanehoan-kevitra simika misy CH3COOH (asidra etanôika) ho vokatra?
Famaritana miaraka amin'ny CH3COOCH = CH2 ho toy ny reactant
nCH3COOCH = CH2 → (-CH2-CH (IZY3) -) n CH3COOCH = CH2 → CH3Cho + CH3COOH + H2O Br2 + CH3COOCH = CH2 → CH3COOCH (Br) -CH2Br Jereo ny fampitahana rehetra amin'ny CH3COOCH = CH2 ho toy ny reactant
Famaritana miaraka amin'ny CH3COOCH = CH2 ho vokatra
Jereo ny fampitoviana rehetra amin'ny CH3COOCH = CH2 ho vokatra